Ny Mpanjakavavy dia tia an'i Clive Scott, ny GM an'ny Sofitel Melbourne
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Mpanjakavavy dia tia an'i Clive Scott, ny GM an'ny Sofitel Melbourne
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ho ela velona ny Mpanjakavavy! Ny mpanjakavavy Elizabeth II dia nanome voninahitra ny Aostraliana 1190 tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Ny mpanjakavavy dia tsy lohan'ny Fanjakana ho an'ny Fanjakana Mitambatra, fa koa ho an'i Aostralia, Kanada ary firenena 13 hafa ao amin'ny Commonwealth.
Mpikambana miavonavona ao amin'ny lisitry ny voninahitra Queens dia mpikambana ao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny aostralianina ary tale jeneralin'ny vondrona hotely Accor.
Faly ny Vondron-trano fandraisam-bahiny frantsay ACCOR ary maniry hahalala an'izao tontolo izao fa ny iray amin'izy ireo dia eken'ny hafa fa ny Mpanjakavavy.
Clive Scott, mpitantana jeneralin'ny Accit an'ny Sofitel Melbourne On Collins, dia voatendry ao amin'ny lisitry ny fanomezam-boninahitra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Queen tamin'ity taona ity ho mpikambana ao amin'ny Order of Australia (AM).
Ny mpanaja dia 252 ihany no nomena tamin'ny 2021, niaraka tamin'i Andriamatoa Scott voafidy ho an'ny asa fanompoana lehibe nataony ho an'ny indostrian'ny hotely sy ho an'ny zavakanto.
Clive Scott dia nanokana 45 taona mahery ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Nandritra izay 26 taona lasa izay, Andriamatoa Scott dia nitana andraikitra lehibe isan-tsokajiny miaraka amin'ny Accor amin'ny loharanon'olombelona sy ny asa manerana an'i Aostralia. Andriamatoa Scott no Tale Jeneralin'ny Sofitel Melbourne On Collins nandritra izay 16 taona lasa izay, nahatonga azy ho iray amin'ireo mpitantana trano fandraisam-bahiny efa ela indrindra tao Melbourne. Izy koa dia filohan'ny Taskforce Economy Visitor ho an'ny Komity ao Melbourne.
Hoy Andriamatoa Scott: "Nanetry tena aho tamin'ity loka ity ary antenaiko fa ny ezaka nataoko nandritra ny taona maro dia nanohana ireo mpanakanto isan-karazany hanatanteraka ny asa kanto nataony.. Ny asako amin'ny zavakanto sy ny fandraisam-bahiny dia tena nahafa-po ahy manokana ary manantena aho fa afaka manao zavatra bebe kokoa amin'ny ho avy. ”
Ny CEO CEO Accor Pacific, Simon McGrath AM, dia nilaza hoe: “Tena reharehako ny mahita an'i Clive Scott ekena ho isan'ireo orinasa manaja azy ao amin'ny lisitry ny fanomezam-boninahitra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Clive dia natokana hampiakarana ny lazany ary hampiroborobo ny fizahan-tany sy ny zavakanto any Aostralia ary io voninahitra io dia fanekena lehibe ny asa mafy nataony sy ny fiatraikany lehibe nananany. ”
Andriamatoa Scott dia mandray anjara mavitrika sy mavitrika amin'ny sehatry ny orinasa sy ny kanto ao Melbourne. Izy dia mpikambana ao amin'ny Birao ao amin'ny Oceania Australia Foundation, Filohan'ny Georges Mora Fellowship, Filohan'ny Departemantan'ny Birao Mpanolo-tsaina sy Marketing ao amin'ny Oniversiten'i Melbourne, ary nitana ny toeran'ny Lehiben'ny Mpitsara ho an'ny Loka Melbourne nanomboka ny taona 2016. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina ny asa fanompoana tanora sy fiankohofana ao amin'ny Hope Street, filohan'ny Birao Mpanolo-tsaina an'i Finucane & Smith ary mpikambana ao amin'ny Birao fahatokisana loka Prize ao Melbourne.
Izy koa dia nanampy tamin'ny fanangonam-bola sy ny fampandrosoana ho an'ny mpilalao manan-danja maro amin'ny sehatry ny zavakanto any Melbourne, toa ny Chunky Move Dance Company, Australian National Academy for Music, Craft Victoria, Heide Museum of Modern Art, The Australian Ballet, National Gallery of Victoria, Opera Victoria, Galerie Art an'ny Monash ary ny Melbourne Symphony Orchestra.
Andriamatoa Scott koa dia nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny medaly volamena fizahan-tany avy amin'ny minisitry ny fizahan-tany frantsay noho ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana fizahan-tany teo amin'i Frantsa sy Aostralia. Nomena mari-pankasitrahana an'i Accor's 2013 Silver Bernache ao amin'ny sokajy Fanajana / andraikitra ara-tsosialy, ary tamin'ny 2015 dia natao ho mpikambana mendri-kaja ao amin'ny Les Clefs d'Or Australia. Tamin'ny taona 2018 dia lasa mpikambana ao amin'ny Bordeaux Wine Society izy ary nahazo loka Brolga avy amin'ny Australian Dancing Society ho an'ny serivisy ho an'ny Dance Sport any Aostralia.
Ankoatr'Andriamatoa Scott, 1190 aostralianina hafa no nahazo ny voninahitra Queen.
kitiho eto ho an'ny lisitra fanomezam-boninahitra 2021.